I-Starfish Bay - I-Airbnb
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Harriet
Chitha isikhathi e-Sandbridge Beach eseceleni, indawo efihlekile yezindunduma zesihlabathi namafutha olwandle. Ngumphakathi okhululekile futhi onokuthula lapho unganciphisa khona ijubane futhi uphumule. Jabulela izindawo ezinhle zangaphandle emaphethelweni namanzi avulekile e-Back Bay National Wildlife Refugees and Amanga e-Cape State Park.
Indlwana yethu ethokomele yasogwini ilinde ukuthi ujabulele ukudlala olwandle, ukuhamba ngesikebhe, i-SUP, ukudoba, ukuhamba ngebhayisikili kanye nethenisi. Ulwandle oluhle lwe-Atlantic luyindawo eyodwa kuphela ukusuka endaweni yokungena ye-resort.
Ukushona kwelanga ebhishi nokushona kwelanga ogwini! Jabulela ikhofi lakho ekuseni kanye ne-cocktail kusihlwa kusuka kudekhi yakho yangasese kanye nedokodo. Uzozizwa sengathi uhlezi phezu kwamanzi ngenkathi ukhona endlwaneni yethu. Ungakwazi ngempela ukuzikhipha kukho konke futhi uphumule kule sethingi.
I-Surfside e-Sandbridge ngumphakathi owamukelayo. Ungangena ngaphandle kwendlwana futhi uhlangane nezakhamuzi nezivakashi njengoba ungena kwi-resort. Ebusuku, izingane zigibela amabhayisikili azo namabhodi amade njengokungathi izinsuku zidlulile.
Sishaya ucingo futhi sinezisebenzi ezitholakalayo ukusiza futhi.